Ngesinye isikhathi umuntu okhubazekile ufuna ukuhlala endaweni yokuzivocavoca, okwenza kube lula ukwenza umsebenzi omuhle wezinsizwa zomzimba. Isihlalo samaRoma singomunye wamasampula ambalwa ongayenza isifundo sesikhathi esigcwele, okufaka ukukhishwa komshini ovela emazingeni ahlukene. Kodwa-ke, inani lokuzivocavoca olutholakala kulo linokukhethwa kukho eziningana. Cabanga ngendlela ephumelela kakhulu kubo.
Ukunyakaza okuthandwa kakhulu, okutholakala izivakashi eziningi ukuya ejimini "esihlalweni se-Roman" simulator, isenzo sokuthi "i-twist". Ukuze wenze kahle, kufanele uqale ukuthatha isikhundla sokuqala: imilenze kufanele ifakwe kuma-rollers akhethekile, isifunda esifundeni kufanele sihlale sigxiliwe kuze kube sekuphelelweni kokuqedwa kwayo, umzimba ufanelwe ngokumelene nokusebenza komsebenzi ebhentshini.
Ukuphakama kokuphakama kwamalungu amadolo ahlobene nesikhumba kuzoxhomeka ekujuleni kwezinsizwa zomzimba. Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukulalela kusengaphambili kule parameter yedivayisi yamandla "Isihlalo saseRoma". I-simulator, ehlelwe ngokuvumelana nezinga lokuqeqeshwa ngokomzimba kothisha, ihlangabezana ngokugcwele nomsebenzi. Ngesikhathi sokuzivocavoca "ukuhlanekezela" udinga ukucindezela izintende zezandla endaweni yesipilitiki, ngaleyo ndlela usekele ikhanda, kodwa ungalicindezeli, futhi uzama ukunciphisa imisipha yomzimba kuze kube yilapho inani elikhulu lingakhona. Khona-ke udinga futhi kancane ukubuyela esimweni sokuqala bese wenza inombolo ecacisiwe yokuphindaphinda.
Inzuzo eyinhloko yokunyakaza okungenhla ukuthi kusetshenziswe ngokufanayo kubo bonke abaqalayo nabadlali abanolwazi. Lezi zinsuku zingasebenzisa nezisindo ezengeziwe ngesimo se-dumbbell noma i-disc ebhasini, icindezelwa emuva kwekhanda.
Kulesi simulator, ungenza nje kuphela amandla, njengokungenhla, kodwa futhi nokuvivinya umzimba. Isihlalo samaRoma kule nguqulo yokuqeqeshwa komshini usebenza njengedivayisi ethile yokulungisa imilenze. Isikhundla sokuqala sifana nokusebenza kwangaphambilini. Umehluko omkhulu awuphikisayo, kodwa uphakamisa icala. Ukunakekelwa okukhethekile kumele kusetshenziswe labo abathintekayo abanokukhubazeka endaweni ye-lumbar lordosis, njengoba iningi lomthwalo liqondiswa kuso.
Ngesizathu esifanayo, awukwazi ukukwenza nge-jerks. Futhi kule simulator ungenza ukuvivinya umzimba okunamandla. Isihlalo samaRoma kule nguqulo yentuthuko yokunyathelisa isebenza okungaphezulu ekusekeleni indawo yamahlombe kanye nesandla. Isisekelo sokunyakaza ukuphakanyiswa kwemilenze kusuka endaweni ehlala phansi ngokushintsha kancane kancane ekuqothuleni indawo ye-pelvic kusuka ebusweni bese kuba se-scapula. Kulokhu, indima eyinhloko yomlawuli wokulinganisa idlala ngezandla. Ngokuvamile, lokhu kuyisivivinyo esinzima kakhulu. Isihlalo saseRoma ngale njongo singasetshenziswa kuphela ngumdlali onolwazi olunemisipha enomzimba osathuthukile hhayi nje kuphela kwesifunda esiswini, kodwa futhi nesigcwele sonke, futhi ikakhulukazi imisipha yebhande lehlombe. Ngakho-ke, ngosizo le-simulator engenhla, kungenzeka ukuba usebenze umshini wezinyathelo ezintathu ezihlukene - kusukela ekululazeleni okulula kuya ekuphakameni okuyinkimbinkimbi komzimba.
I-Dukan: ukudla okuphakade
Ukuzivocavoca okuyisisekelo ku-gym for Wabasaqalayo